It is me. Ko Niknayman.: မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကားမောင်းခရီး စတင်ပါပြီ။
မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကားမောင်းခရီး စတင်ပါပြီ။
လေးစားပါတယ် ကိုစည်သူ။ ကိုစည်သူရဲ့မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေး ကားမောင်းခရီး စတင်လျက်ရှိပါသဖြင့် လမ်းခရီးစဉ်တစ်လျှောက်တွင် အားပေးဂုဏ်ပြုပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံများ ပိုမိုကြည့်ရှုရန်အတွက် -
Posted by Ko Niknayman at 9:54 AM